ဂျန်အီလ်ဝူး - ဝီကီပီးဒီးယား
(1987-09-09) ၉ စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၈၇ (အသက် ၃၃)
၂၀၀၆–၂၀၁၆ (Military Hiatus)
ဂျောင်အီဝူး (ဟန်းဂု: 정일우; ၉ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၇ မွေး) သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်ကာ၊ တန့်မရတဲ့အမြင့်ကန်ချက် (၂၀၀၆)၊ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများဖြစ်သော အီဂျိမဲ ပြန်လာခြင်း (၂၀၀၉)၊ ၄၉ရက် (၂၀၁၁)၊ ညစောင့်ရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်း (၂၀၁၄)နှင့် စင်ဒရဲလားနှင့်သူရဲကောင်းလေးဦး (၂၀၁၆)တို့၌ ထင်ရှားသည်။
၇ ဆိုရှယ် ကန်ထရီဗျူးရှင်း
ယခင်ရုပ်သံတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတင်ဆက်သူ၏ သားဖြစ်သော ဂျောင်အီဝူးသည် မူလက ဆိုးလ်အနုပညာကော့လိပ်၌ အသံလွှင့်ခြင်းကို သင်ယူနေသော်လည်း နောက်ပိုင်း ထွက်လိုက်ပြီး၊ ဟန်ယန်တက္ကသိုလ်၌ ပြဇာတ်နှင့်ရုပ်ရှင်ဌာနသို့ ပြောင်းခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ဩဂုတ်၌ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သော လီမင်ဟိုနှင့် အတူ ကားစီးရာမှ ပြင်းထန်သောမတော်တဆ၌ နှစ်ယောက်လုံး ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြသည်။ 
၂၀၀၆ ၌ သည်းထိတ်ရင်ဖို အသံမဲ့ကမ္ဘာ၌ ဇာတ်ရံအဖြစ် ပွဲဦးထွက်လာခဲ့ပြီး ပုန်ကန်လိုသော လူငယ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သော တန့်မရတဲ့အမြင့်ကန်ချက်၌ စတင်ကျော်ကြားလာသည်။ ၂၀၀၇ တွင် ငါ့ချစ်သူ၌ ပါသည်။
၂၀၀၉ ၌ သမိုင်းဇာတ်လမ်းဖြစ်သော အီဂျိမဲ ပြန်လာခြင်း၌ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ရသည်။ ၎င်းဇာတ်လမ်းကို လူငယ်ထု ကြိုက်ကြသောကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် ကိုရီးယားဂျူနီယာကြယ်ပွင့်ဆုပေးပွဲ၌ ဒေဆန်ဆုကို ရရှိသည်။ အချစ်ဟာသ မိုင်ဖဲယားလေဒီ၌ ဇာတ်ရံ ပါဝင်သည်။ ထို့နောက် သူ့ကိုယ်သူ စိန်ခေါ်သည့်အနေနှင့် ဂျပန်ပြဇာတ်ရေးဆရာ မယုမိ နခတနိ ရေးသော ရောင်းမလောက်သည့် လှပတဲ့ဆန်းဒေးပြဇာတ်၌ အိတ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိသော ဂေးအဖြစ် ၂၀၁၀ ပွဲဦးထွက် စင်တင်ကပြလေသည်။
ဂျန်ကို အထူးကျော်ကြားစေသည့် ဇာတ်ကောင်မှာ ၂၀၁၁ မျက်ရည်ချူသည့် ၄၉ရက် ဇာတ်လမ်းတွဲမှ ခေတ်ဆန်ကာ ဉာဏ်များသော သေမင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ အခပေးအချစ်ဟာသ ပန်းလူလေးရဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုင်(Flower Boy Ramyun Shop)၌ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၂ ပေါက်သမိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သော နေကိုဖက်တဲ့လ၌ ဇာတ်ပို့အဖြစ် ပါဝင်သည်။
၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၄ ထိ ရွှေသက်တံ့၌ ရှေ့နေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည်။
ဂျန် ကိုရီးယားလှိုင်းကြယ်ပွင့် ဖြစ်လာသည့်အခါ၊ ကမ္ဘာတဝန်းရှိ ပရိသတ်များကို တွစ်တာ၊ စိုင်ဝေါ၊ အင်စတာဂရမ်နှင့် ဝေးပေါ်စသည့် ဆိုရှယ်နက်ဝပ်များမှ ဆက်သွယ်သည်။ ၂၀၁၂ ပေကျင်းဟွာတင်းဆုပေးပွဲ၌ ဆုပေးပွဲစတင်ကျင်းပသည့် ၂၀၀၅ မှစ၍ ပထမဦးဆုံးသော တရုတ်အနုပညာရှင်မဟုတ်ဘဲလျက်၊ အာရှအမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆုကို ရရှိသည်။ ၂၀၁၅ ၌ ကိုရီးယားနှင့်တရုတ် တွဲထုတ်သော High-End Crush ၌ ဂျင်ဆယ်ယွန်းနှင့် အပြိုင် ပါဝင်ရာ၊ တလအတွင်း ကြည့်ရှုသူ သန်း ၂၀၀ ဖြင့် စံချိန်တင်ပြီး၊ ဂျန်သည် ပို၍ လူကြိုက်များလာသည်။ ထို့နောက် တရုတ်အချစ်ဟာသ ဖြစ်သော ယောက်ျားလျာများပုန်ကန်ခြင်း၌ သရုပ်ဆောင်သည်။ သူသည် ဟူနန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သော မိန်းမလှ၌ ပါဝင်ရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ၌ အိတ်ချ်ဘီခေါ်သော အေဂျင်စီအသစ်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ပြီး၊ ဇွန်လ၌ ဂွန်ရတ်ဂိမ်မာယာ၌ ပါဝင်ပြီး၊ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ပထမဆုံးပါဝင်သော ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် ဖြစ်လာသည်။  ဩဂုတ်၌ တီဗီအင်၏ စင်ဒရဲလားနှင့်သူရဲကောင်းလေးဦးဖြင့် ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလောကသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်သည်။
၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ၌ ဦးနှောက်နှင့်ဆိုင်သော နှလုံးအဆို့ရှင်အားနည်းခြင်းကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီး စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်သော်လည်း ဒီဇင်ဘာ၌ စာရင်းပေးသွင်းခဲ့သည်။ 
2008 The Secret of Coocoo Island 크크섬의 비밀 Lee Yoon-ho MBC cameo, episode 1
2009 The Return of Iljimae 돌아온 일지매 Iljimae MBC
High Kick Through the Roof 지붕 뚫고 하이킥 Il-woo MBC guest, episode 35
2011 49 Days 49일 Scheduler/Song Yi-soo SBS
High Kick: Revenge of the Short Legged 지붕 뚫고 하이킥 Il-woo MBC guest, episode 40
2012 Moon Embracing the Sun 해를 품은 달 Prince Yang-myung MBC
2013 Queen of the Office 직장의 신 Cha Chi-soo in
Chasung Group TV ad
KBS2 cameo, episode 3
2013-2014 Golden Rainbow 황금 무지개 Seo Do-young MBC Main Cast
2014 The Night Watchman's Journal 야경꾼일지 Lee Rin MBC Main Cast
2016 Cinderella and Four Knights 신데렐라와 네 명의 기사 Kang Ji-woon tvN Main Cast
2017 Love and Lies กลรักเกมมายา Tim True4U First Thai drama
TBA Beautiful Woman 女人花似梦 Kim Moon-ho Hunan TV First Chinese drama
2006 The World of Silence 조용한 세상 young Ryu Jung-ho
Running Man (Ep. 242) SBS
2016 Running Man (Ep. 283, 290) SBS
2009 "Guilty" 죽일 놈 narration for Dynamic Duo song
2011 "Scarecrow" 허수아비 track from 49 Days OST
"Someone Like You" 너란 사람 track from Flower Boy Ramyun Shop OST
2014 "Rain Tears Instead" 차라리 비눈물에 track from The Night Watchman's Journal OST, duet with Nicole Jung
2012 4th Japan-Korea Friendship Festival Korean representative
2007 44th Baeksang Arts Awards Best New Actor (Film) My Love ဆန်ကာတင်
9th Mnet KM Music Festival Best Actor inaMusic Video Goodbye Sadness ဆုရရှိ
1st Mnet 20's Choice Awards New Star Award Unstoppable High Kick ဆုရရှိ
Drama Star Award ဆုရရှိ
MBC Entertainment Awards Best Male Newcomer inaComedy/Sitcom ဆုရရှိ
2009 2nd Korea Junior Star Awards Daesang (Grand Prize), TV category The Return of Iljimae ဆုရရှိ
KBS Drama Awards Best New Actor My Fair Lady ဆန်ကာတင်
2012 7th Asia Model Festival Awards Fashionista Award 49 Days, Flower Boy Ramyun Shop ဆုရရှိ
2nd Ministry of Health and Welfare Share Happiness Awards Recipient N/A ဆုရရှိ
7th Huading Awards Asia Male Actor Award ဆုရရှိ
MBC Drama Awards Excellence Award, Actor inaMiniseries Moon Embracing the Sun ဆန်ကာတင်
2013 iQiyi Awards Male Actor Award ဆုရရှိ
MBC Drama Awards Excellence Award, Actor inaSpecial Project Drama Golden Rainbow ဆန်ကာတင်
2014 MBC Drama Awards Top Excellence Award, Actor inaSpecial Project Drama The Night Watchman's Journal ဆုရရှိ
↑ K-Pop stars gear up for Pope Francis' visit with papal tributes (14 August 2014)။ 2015-04-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kang၊ Myoung-seok (21 October 2009)။ 10LINE: Lee Min-ho။ TenAsia။ 2014-02-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Han၊ Sang-hee (13 January 2009)။ Young Star Jung il-woo Returns With Iljimae။ The Korea Times။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Moon River Interview with Jung Il-woo။ MBC Global Media (29 January 2009)။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Oh၊ Jean (4 February 2009)။ KBS drama up against MBC's comic-book hero။ The Korea Herald။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Ji-eun (30 October 2009)။ INTERVIEW: Actor Jung Il-woo - Part 1။ TenAsia။ 2014-03-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Ji-eun (30 October 2009)။ INTERVIEW: Actor Jung Il-woo - Part 2။ TenAsia။ 2014-03-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Han၊ Sang-hee (18 August 2009)။ New Drama to Bring Modern Princess With Edge။ The Korea Times။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chung၊ Ah-young (27 January 2010)။ Jung Il-woo to Make His Stage Debut။ The Korea Times။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (5 January 2011)။ Jung Il-woo cast as male lead in upcoming SBS drama။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (9 March 2011)။ Jung Il-woo says watched films Meet Joe Black and Constantine to prep for new drama။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Ji-hye (18 March 2011)။ INTERVIEW: Actor Jung Il-woo of 49 Days။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Ji-hye (25 April 2011)။ Actor Jung Il-woo's Movie Picks။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Ga-on (31 May 2011)။ INTERVIEW: Actor Jung Il-woo။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (27 October 2011)။ Jung Il-woo watched Boys Over Flowers for new series။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (26 December 2011)။ Jung Il-woo confirms appearance in new historical drama။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sunwoo၊ Carla။ "Jung Il-woo to appear in MBC drama"၊ 26 December 2011။ 2012-10-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Eun-hwa (20 March 2012)။ Interview: Jung Il Woo Would Be 'Yang Myung' Again။ enewsWorld။ 20 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Eun-hwa (20 March 2012)။ Interview: Jung Il Woo and Kim Soo Hyun are Now BFFs။ enewsWorld။4March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Cory (15 October 2013)။ Jung Il-woo to Pair Up with U-ie in New Drama။ TenAsia။ 18 April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Interview: Golden Rainbow Jung Il-woo။ MBC Global Media (15 November 2013)။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Yena (3 April 2014)။ Interview: Jung Il Woo, "I Like Being Called Flower Boy"။ BNTNews။ 2014-04-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Min-ji (12 April 2014)။ Interview: Jung Il Woo Says the Gap Period Became His Flesh and Blood။ enewsWorld။ 14 April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-04-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Eun-hwa (2 December 2011)။ Interview: Jung Il Woo, From Pretty Boy to Earnest Actor။ enewsWorld။ 25 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Suk၊ Monica (29 June 2012)။ Jung Il-woo becomes 1st Korean actor to be invited to China's Huading Awards။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Web Drama ‘High-End Crush’ Hits 200 Million Views in China | Mwave။5March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 January 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jung opts forarole in Chinese movie (8 May 2015)။ 2015-05-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Actor Jung Il Woo to take on his very first Chinese drama
↑ Jo၊ Yeong-yeong (12 January 2016)။ 정일우 中위에화 이어 韓HB엔터 전속계약။ Newsen။ 2015-11-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jung Il Woo is the first k-drama star to landalead role in
↑ Jung Il Woo, Park So Dam, Ahn Jae Hyun and More Cast in New Fairytale Drama | Soompi
↑ Jung Il Woo Enlisting In National Service Despite Cerebral Aneurysm | Soompi
↑ Ho၊ Stewart။ "Jung Il Woo to Guest on Chinese TV Talk Show Tian Tian Xiang Shang"၊7May 2012။ 2012-11-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 January 2013။
↑ Hong၊ Lucia (8 May 2012)။ Jung Il-woo to make appearance on TV program in China။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (29 March 2011)။ Jung Il-woo to sing track for SBS' TV series 49 Days soundtrack။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Jung Il-woo, Kim So-eun to Promote Jeonju Int'l Film Fest"၊9March 2011။ 2012-11-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Jessica (22 March 2011)။ Jung Il-woo, Kim So-eun to promote Jeonju film fest။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Ji-hye (28 April 2011)။ (JIFF) Jung Il-woo, Kim So-eun: Goal is to watchamovie and haveaget-together။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sunwoo၊ Carla (29 March 2012)။ Jung Il-woo invited to Korea-Japan diplomacy festival။ Korea JoongAng Daily။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Eun-hwa (3 April 2012)။ Jung Il Woo Invited to '4th Japan-Korea Friendship Festival'။ enewsWorld။3March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Eun-hwa (10 April 2012)။ Jung Il Woo Meets Fans in 'Korea-Japan Friendship Festa'။ enewsWorld။3March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (18 January 2012)။ KARA, Jung Il-woo, Rainbow to be honored at 2012 Asia Model Festival Awards။ TenAsia။ 2014-02-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျန်အီလ်ဝူး&oldid=639189" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။